PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - BABONGE ISIMO SEZULU BEHLULA I-INDIA
BABONGE ISIMO SEZULU BEHLULA I-INDIA
U-AB de Villiers ongukaputeni weqembu lesizwe lakuleli le- cricket, iProteas, uvuma eyokusizwa yisimo sezulu okwenze elakuleli lanqoba okokuqala i-India emidlalweni yochungechunge ye-One Day International (ODI) egijinywa ezinkundleni ezahlukene zakuleli.
IProteas ihlule i-India ngama- wicket ayisihlanu seyisizwa wuhlelo olubizwa ngeDuckworthLewis emdlalweni wesine we-ODI obungoMgqibelo eBidvest Wanderers Stadium, eGoli.
IDuckworth Lewis wuhlelo olusetshenziswa ukubalela iqembu elisuke libhetha uma ngabe umdlalo uke waphazamiseka. Luvamise ukusetshenziswa kakhulu uma umdlalo uphazanyiswe yisimo sezulu.
I-India isihamba phambili ngo-3-1 kwi-ODI kanti iProteas isengakwazi ukuyibamba njengoba la mazwe esalelwe yimidlalo emibili. Azodlala kusasa ngoLwesibili eSt Georges Park, eBhayi, bese evala ngozokuba ngoLwesihlanu eCenturion, ePretoria.
UVirath Kohli ongukaputeni we-India, unqobe ithosi kulo mdlalo wabe esecela ukuba ezakhe ziqale ngokubhetha. I-India ibeke ebhodini amarun angama-289 kuphume abantu bayo abayisi-7, kuma-over angama-50. IProteas ingene kufanele ibeke ebhodini ama-run angama-290 ukuze inqobe umdlalo.
Umdlalo uphazanyiswe yimvula enamandla kangangoba uke wama ngenxa yokushaya kombani. Kube sekusetshenziswa uhlelo lweDuckworthLewis olwenze izinto zalula kwiProteas njengoba inqobe lo mdlalo ngama- wicket ayisihlanu.
Umdlalo ugcine uphele kusaphume abadlali abayisihlanu kwiProteas ibeke ebhodini ama- run angama-207, kuma- over angama-25.3.
UDe Villiers, obekuwumdlalo wakhe wokuqala ne-India selokhu kuqale eye-ODI kuleli, uthi babonga isimo sezulu.
“I-India ibiwulawula umdlalo, besithwele kanzima kwasiza sona isimo sezulu esivune thina. Ngikhalela kakhulu abantu abebephume ngobuningi babo ukuzoseka umkhankaso we- pink day njengoba sizama ukuxwayisa ngawo abantu ngesifo somdlavuza. Kodwa-ke bazibonele ukuthi kuphoqe isimo besingaphezulu kwamandla ethu.
UKohli uthe: “Umdlalo ubuvuna thina kwaze kwaba uphazanyiswa yisimo sezulu.
Kodwa-ke asazi ukuthi bekuzokwenzakalani ukuba sigijime umdlalo ophelele, asizange siphazanyiswe yisimo sezulu.
"Ngiyayibongela iNingizimu Afrika ngokunqoba lo mdlalo, idlale ngokuzinikela bekuyifanele ukunqoba.”